25th May 2019 | ११ जेठ २०७६
निस्सिम किन मौन?
भनिन्छ, यो दुनियाँ एउटा रंगमञ्च हो र हामी सब कलाकार। यो रंगमञ्चमा हरक्षण, हरपल अनेक नाटकहरु मञ्चन भइरहन्छन्। कथा, विषयवस्तु उस्तै भए पनि पात्र, प्रस्तुती र भोगाइ फरक चलिरहन्छ। अनुभूति फरक हुन्छ। हेर्ने नजरिया पनि। किशोर किशोरी सामाजिक रंगमञ्चका नव कलाकार। युवावयमा पाइला चाल्न थालेका किशोर किशोरीको मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो छैन। उनीहरुका इच्छा र आकांक्षा अनेक हुन्छन्। युवावयमा पाइला चाल्न…
हातमा केही सीप नभएको, दिनभर क्यारेम बोर्ड खेलेर बरालिएको र आफ्नो बसमा नरहेको लठुवा छोरालाई सुपरभाइजरमा हाल्दिनु पर्‍यो भनेर कयौं अनुरोध गर्न आउँथे। अनुहार हेर्दै हामी चाल पाइहाल्थ्यौं र कुनै न कुनै बहानामा टारिदिन्थ्यौं। यस्ता सुपरभाइजर भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता त्यहीँ टुङ्गिँदैन थियो। निर्माण स्थलमा (साइटमा) स्थानीय नेता वा उनका नजिकका धुपौरेहरु पाए खानासहित नभए पनि नास्ता 'बजाउने' गरी थानका थान…
04th March 2019 | २० फागुन २०७५
शासकको कानमा घनझैं बज्रेको एउटा गीत
हाम्रो देश समय र परिस्थिति अनुरुप फेरिदै गयो। हामी जान्ने भएपछि नै देशमा निकै परिवर्तनहरु भए। युद्द सकिएर देशमा अमन चैन सुरु हुन थाले। युवा ढुक्क हुँदै थिए, अब देशमै केहि गर्न सकिन्छ भनेर। शान्ति प्रक्रिया सकिएर देशमा संविधान पनि आयो। निसन्देह यसमा नेताहरुको अहोरात्र योगदान रह्यो। देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्र हामीले कतिवटा प्रधानमन्त्री पायौं? त्यो बिचमा कति…
25th February 2019 | १३ फागुन २०७५
राजाले त के पशुपतिनाथले पनि के सक्लान र?
केटाकेटी हुँदा साथीहरुले अलि ठूलो खाडल देखाएर 'यो खाल्डो नाघ्न सक्छस्?' भनेर सोध्दा असम्भव लाग्थ्यो। अनि भनिन्थ्यो- 'यो त राजाले नि नाघ्न सक्दैनन्।' राजा त विष्णु भगवानकै अवतार हुन् भन्ने सुन्दै आएकाले अरुले नसके राजाले सक्छन् भन्ने बुझाइ गढेको थियो मनमा। अहिले देशको अवस्था र राजनीतिक दलका नेताहरुले अपनाएको शैली हेर्दा सानामा देख्ने गरेको खाडलभन्दा धेरै ठूलो भड्खालो तयार भएको…
कोही अपरिचित तपाईँको काखमा बच्चा राखिदिएर छुट्यो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो बेला? के सोच्नु भो? 'सेन्सलेस' हैन त? हिजो भयो त्यस्तै। साँझको ६ बजे अफिसको काम सकाएर कार्यालयबाट निस्किएँ म। गाडी चढ्न रत्नपार्क पुगेँ। रत्पार्क बसपार्क सबैतिरको गाडी चढ्ने 'जक्सन'। थानकोट होस् या बनेपा, बालाजु होस् या कीर्तिपुर सबैतिरको बस कुर्ने केन्द्र। सधै भिड, सधै नै चाप।…
09th February 2019 | २६ माघ २०७५
दीपज्योति श्रेष्ठ - सोनाम ल्होसारका दिन टुँडिखेल म्युजिकमा झुम्दै थियो। चर्का आवाजमा घन्किरहेको कन्सर्टको म्युजिकले त्यसको ठीक सामुन्ने रहेको सुन्धारालाई कत्ति पनि तताउन सकेको थिएन। भिडभाड र गाडि नआएको आक्रोशको बीचमा त्यो कन्सर्टको म्युजिक फिका लागिरहेको थियो, धेरैलाई। अफिस-टाइम सडकमा गाडी-गाडी देखिनु पर्नेमा सडकभरि मान्छे यत्रतत्र थिए। कोही हतारमा जेब्राक्रसिङ नै नभएको काठमाडौं मल अगाडिको बाटोबाट टुँडिखेलतिर बाटो काट्न हतारिँदै…
शुक्रबार मेरा पैतालाहरुको आधा हिस्सा अडिएका थिए, फलामे पातामा। आधा आधारहीन ठाउँमा थिए। जिउको भार असन्तुलित रुपमा पछाडितिर जान खोजिरहेथ्यो, कुर्कुर्चाले टेकेतर्फ। धेरै कौतुहलता अनि उत्तिकै डर। मलाई आफ्नै खुट्टा हेर्न मन लाग्यो। 'तल नहेर्नु है। उ पर डाँडामा हेर्नु' - बन्जी मास्टर भोला श्रेष्ठले यस्तै केही भने। मैले सुनेँ पनि। उनको निर्देशन मान्न पनि मुन्टो निहुर्‍याउन मिलेन। आँखा जबर्जस्ती तलतिर…
'नरो गंगा नरो' थापाथली स्थित प्रसुती गृहको पोस्ट अप वार्डको बेडतिर नजर लगाउँदै राममायाले छोरीलाई सान्तवना दिइन्। राममाया अर्थात् १२ वर्षमा भर्खैरै आमा बनेकी गंगा प्रजाको आमा। गंगालाई अपरेशन थियटरबाट भर्खरै पोस्ट अप वार्डमा सारिएको छ। दुई घण्टा लामो अपरेशनपछि उनी आमा बनेकी हुन्। भर्खरै अपरेशन सकेकाले कामिरहेको छिन्। दुईवटा ब्ल्याङ्केट खप्ट्याउँदा पनि जाडो कम भएको छैन। नर्सहरु सेवामा खटिइरहेका छन्।…
13th December 2018 | २७ मंसिर २०७५
मैले स्वीकार्न नसकेको 'प्रसाद'
केहीअघि बलिउडको धेरै नै अपेक्षा गरिएको फिल्म 'ठग्स अफ हिन्दुस्तान' हेरिरहँदा नै निराश भइएको थियो, फिल्म औसतमात्र देखेर। अपेक्षा बढी हुनु घातक रहेछ। त्यो फिल्मको मध्यान्तरमा देखाइएको ''प्रसाद''को ट्रेलरले चाहिँ छोटै समय भए पनि रमाइलो बनाएको थियो। मतलब ठग्स… हेर्दाको निराशा एकैछिन भए पनि बिर्साएको थियो। सँगै गएका साथीहरूसँग सेयर गरेको थिएँ – अहो! कस्तो राम्रो। यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। राम्रा…
शिशिर वैद्य /पहिलोपोस्ट
16th September 2018 | ३१ भदौ २०७५
जेम्स तुलाधर यो वर्ष विदामा बुबासँग नेपाल घुम्न आएको छ। बहिनी टिफनी पनि सँगै छिन्। उनीहरु दुवै नेपाली बोल्न जान्दैनन्। तर, आमा बुबासँग सँधै देश विदेश घुमिरहने भएकाले यहाँको माहोलमा घुलमिल गर्न उनीहरुलाई असहज छैन। जेम्स लण्डनमा बस्छन। मेरो छोरा अभिनव भन्दा जेम्स एक वर्षले मात्र कान्छो छ, उमेर एघार वर्षमात्र। पहिलो भेटमा छोराले जेम्सलाई तिमी कति कक्षामा पढ्छौ भनेर…